Ilaina amin’izao andro izao ny hery sy tanjaka
"Kanefa izao indrindra no nampaharetako anao, dia ny hampahita anao ny heriko mba hambara amin'ny tany rehetra ny anarako." - Eks 9.16 .
Mihoatra noho izay iheveran'ny maro azy ny fiainana kristianina. Tsy hamoram-panahy, faharetana, halemem-panahy sy hatsaram-panahy fotsiny izany. Zava-dehibe ireo fahasoavana ireo, nefa ilaina koa ny herim-po, ny tanjaka, ny faherezana sy ny fikirizana. Ny lalana izay soritan'i Kristy dia ety, mitaky fahafoizan-tena. Ny handeha amin'izany lalana izany sy ny handroso hatrany hanavatsava ny zava-tsarotra sy mahakivy dia mila olona hafa noho ny farofy.
Irina ny olona manam-pikirizana, ny olona tsy miandry ny hahamora ny lalany sy hahafaka ny zava-manakana rehetra, ny olona izay hahatonga hafanam-po vaovao eo amin'ny ezaka mihareraka ataon'ny mpiasa efa kivy, olona izay manana fo mafana noho ny fitiavana kristianina sy manana tanana matanjaka eo am-panaovana ny asan'ny Tompony.
Misy amin'ireo niditra nanao fanompoana misionera no malemy, malezolezo, tsy manan-kerim-po, mora kivy. Tsy ampy fampirisihana izy. Tsy manana ireo lafin-toetra tsara izay manome hery hahavita zavatra izy, dia ny toe-tsaina sy ny herim-po mampirehitra ny hafanam-po izany. Ireo izay te hahita fahombiazana dia tsy maintsy hahery fo sy ho be fanantenana. Tsy ny toetra tsara mifady ratsy ihany no tokony hokolokoloiny fa ny toetra tsara mahavita asa tsara koa. Tokony hanana valin-teny malefaka hampisava ny hatezerana izy, ary tsy maintsy manana ny herim-pon'ny mahery fo koa hoenti-manohitra ny ratsy. Miaraka amin'ny fitiavana izay maharitra ny zavatra rehetra, dia ilainy ny toetra amam-panahy matanjaka izay hahatonga ny hery miasa avy aminy ho hery mahavita soa.
Misy tsy manana toetra amam-panahy mafy orina. Tsy misy endrika sy toetra raikitra ny drafitra ataony sy ny fikasany. Kely ny asa mahasoa vitany eo amin'izao tontolo izao. Io fahalemena amin'ny tsy fananana hevitra tapaka io, io tsy fahavitan-javatra io dia tokony horesena. Ao amin'ny toetra amam-panahy tena kristianina dia misy herim-po tsy mety kivy izay tsy voavolavola na voafehin'ny toe-javatra manohitra. Tsy maintsy manana hazon-damosina isika eo amin'ny fitondran-tena, tsy maintsy manana fahamarinan-toetra tsy no dokadokafana foana, tambitambinana, na ampitahorina.
Irin'Andriamanitra ny hampiasantsika ny fotoana mety rehetra mba hahazo antoka ny fanomanana hanao ny asany. Antenainy hametraka ny herintsika rehetra isika ho fanatanterahana izany sy hiambina ny fontsika ho velona eo amin'ny fahamasinan'izany asa izany sy eo amin'ny andraikitra mahatahotra raketiny. - TMF, t. 333.